Izinyanga nezinsuku ngesiZulu – iAfrika
Izinyanga nezinsuku ngesiZulu
Ukufika kwemfundiso yabamhlophe esizweni sikaPhunga kusenze saguqula izindlela esiphila ngazo. Noma kukhona okuhle okufike nabo abamhlophe kodwa phela akukho soka elingenasici. Ukufika kwabamhlophe kukhona umonakala okuwudalile, phakathi kwakho singabala ukulahlekelwa isintu sethu bese siphenduka sibuke okwabo, bese kugcina kuthinta ngisho indlela esiziphatha ngayo kanye nalokho esikukhulumayo. Iqiniso elimsulwa nje yikho ukuthi izinkuni ezazibaselwe ekutheni zisigqugqumezele ekukhulumeni izilimi zethu zomdabu, lezo nkuni sezilothile zaba wumlotha obanda qa! Izingane ezikoleni zifundiswa ukubala ngesilungu, ngisho izinsuku zesonto zifundiswa ngesilungu kanye nazo belu izinyanga zonyaka. Lokhu singakubeka khona ekufikeni kwezikole ngoba phela yizona ezibheka izincwadi okumele zifundwe ngabantwana. Lezo zincwadi zikuqukethe okwakhayo ziphinde futhi ziqukathe okubhidlizayo. Kulapho la kusala khona ekufundisekeni kwabantwana ngamasiko nangendlela yokuphila kwesintu. Kuleli khasi-ke siloba ngamagama esintu okubizwa ngawo izinsuku kanye nezinyanga zonyaka ngesiZulu.
January – uMasingana
February – uNhlolanja
March – uNdasa
April – uMbasa
May – uNhlaba
June – uNhlangulana
July – uNtulikazi
August – uNcwaba
September – uMandulo
October – uMfumfu
Izinsuku zesonto zona ke zibizwa kanje
Monday – uMsombuluko (okuwusuku lokusombuluka)
Tuesday – uLwesibili (ngoba phela usuku lwesibili)
Wednesday – uLwesithathu (okuwusuku lwesithathu)
Thursday – uLwesine (okuwusuku lwesine)
Friday – uLwesihlanu (usuku lokuphetha isonto)
Saturday – uMgqibelo (noma iSabatha. OkweSabatha kusuka kulaba abakhonza enkonzweni yakwaShembe eNazaretha ngoba wusuku abakhonza ngalo lolu)
Sunday – iSonto (Lolu suku abanye bathi wusuku lokugcina esontweni kanti abanye bathi wusuku lokuqala esontweni elisha)
Tags Amasonto, Izinsuku, Izinyanga, Ukubala
1 thought on “Izinyanga nezinsuku ngesiZulu”
Uma kuthiwa Isonto usuku lokuqala, kungani okubhalwe ngo Mdali ukuth ekuqaleni wadala iZulu noMhlaba.. futhi esewuphethile uMhlaba wathi usuku elilandelayo elokugcina okuyiSabatha okungusuku lwesikhombisa, iSonto. Wathi lolusuku lokugcina silenze libengcwele, kungasetshenzwa ngalo, ungamsebenzisi omunye umuntu oyisisebenzi sakho futhi sikhonze yena kuphela?